Nchịkọta nchịkọta nwere ike iduhie gị | Martech Zone
O ruola ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ iri abụọ m malitere ịzụ ahịa mgbasa ozi. Enwere m ekele maka ohere ndị mere ka m bute ụzọ na teknụzụ azụmaahịa nchekwa data n'oge ahụ. Obi dịkwa m ụtọ na anyị chọpụtara nchekwa data ngwa ngwa Ngwuputa. Imirikiti ngwaọrụ n'oge ahụ nyere anyị nchịkọta ọnụ ọgụgụ n'ofe dum nchekwa data. Mana nchịkọta ọnụ ọgụgụ ndị a nwere ike iduhie gị.
Na mkpokọta echiche nke ndị ahịa anyị, anyị ga-achọpụta na profaịlụ ndị ahịa anyị bụ nke nwoke, afọ, ego ma biri n'otu mpaghara. Iji zụọ ahịa na nke ahụ, anyị ga-ajụ ndị ezinụlọ ahụ ajụjụ. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ ụmụ nwoke, afọ 30 ruo 50, na ego ezinụlọ ha karịrị $ 50k. Anyị ga-agbanye ndị na-ege ntị mkpọsa site na ozi sitere na ụlọ na akwụkwọ akụkọ site na mpaghara ma anyị ga-agba mbọ hụ na anyị ga-akụ onye ọ bụla na ajụjụ ahụ.
Ka akuko na nkewa nkewa siri ike, anyi nwere ike igwu ala. Kama ileba anya na nchekwa data niile, na mberede, anyị nwere ike ịkekọrịta nchekwa data ma chọpụta akpa nke personas ndị nwere atụmanya dị ukwuu. Dịka ọmụmaatụ, ihe atụ dị n'elu nwere ike ileghara ndị nne na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye anya karịa $ 70k karịa nke edepụtara dịka onye ahịa. Ọ bụ ezie na anyị niile nwere mmekọrịta mmadụ na ibe anyị, eziokwu bụ na ọ dịghị mmadụ abụọ n'ime ha.
Na ahia ahia nke ntaneti, ihe omuma bu otu uzo. Somefọdụ n'ime unu nwere atụmanya nke ịhụnanya na-atụle… ụfọdụ na-enwe mmasị n'ịgụ akwụkwọ, ụfọdụ na-enwe mmasị ịkekọrịta foto, lelee vidiyo, na ụfọdụ na-achọ ịpị ezigbo ego mgbe ha hụrụ ya. Onweghi otu uzo nke g’eme ka olile anya gi nile gbasaa ka igbata atumatu gi ghafee ndi ozo ga emeputa ihe kariri Ma mgbe ị na - azụ ahịa ọtụtụ ọwa n'etiti ndị na - ajụ gị ga - ebute nsonaazụ ka ukwuu.
N'ime nke ọ bụla n'ime ndị na-ajụ ase, ị nwere ike ịgwa ngalaba dị iche okwu - yabụ ịkwesịrị ịnwale ma nwalee ọdịnaya na ọdịnaya dị iche iche. A blog post nwere ike ịbụ nke kachasị mma ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọmụma ma na-enye nghọta maka otu ndị ahịa na-eji ngwaahịa gị nke ọma. Mana vidiyo Youtube nwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma gụnyere itinye akaebe nke ndị ahịa. Ihe ngosi ọkọlọtọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma karịa ego.
Ọ bụ ya mere ahịa ịntanetị ji dị mgbagwoju anya. Nọgide na-enwe akara ngosi na ozi na-agbanwe agbanwe na mgbasa ozi niile, na-agbasi ike nke mgbasa ozi ọ bụla, na ịgwa mmadụ okwu dị iche iche chọrọ ọtụtụ ọrụ. O zughi ịhụ otu anya nke ndị ahịa gị… ị ga-adanye n'ime mmiri gị ọ bụla wee chọpụta ụdị mmadụ ị na-eru. O nwere ike iju gị anya.
Tags: nchịkọta ọnụ ọgụgụnkeziahịa profaịlụigwu dataNgwuputandị mmadụọnụ ọgụgụ